Jaya rinoparadza iyo iPhone yeApple Chitoro ne petanque | IPhone nhau
Ichokwadi kuti isu tese tinogona kuve nezuva rakaipa, ini pachangu ndakange ndiinaro nezuro muApple Store ndichigadzirisa matambudziko eBluetooth neWiFi pane iPhone SE. Nekudaro, chokwadi ndechekuti iyo Genius kuApple Chitoro inowanzo kuve nehushamwari uye inoda kugara ichigadzirisa matambudziko ako. Kunyangwe vasiri vese vashandisi vanopedzisira vatora aya marudzi ezviitiko nerunyararo rwakafanana. Jaya rine kusavimbika kwepfungwa rakagunun'una rasarudza mangwanani ano kuti ripinde muApple Store rakashongedzwa nemaboules bhora, mhedzisiro yacho inokuvadza kuona, gumi nemaviri emidziyo pakati payo yatinayo iPhone 7 uye MacBook inopedzisira yaparara. Usapotsa kupatsanurwa kweiri jaya pavhidhiyo.
Zvakaitika mutaundi reFrance reDion. Jaya rinopinda muApple Chitoro uye nematanho emhere anoratidza humbowo hwekusagadzikana kwepfungwa mamiriro, kana kungoita upenzi hwakanyanya. Ipapo akapfeka girovhosi rake (izvo zvinopa kutenda kwakajeka kuti zvese zvakafanorongerwa, zvakakosha kana zvasvika pakumhan'ara mhosva yacho), ari kuzozvicheka nemagirazi evakarwadziswa, anotanga kuparadza zvese zvishandiso neapuro-rakavhenekwa apuro iro rinoyambuka nzira.
Kubva kuActualidad iPhone isu tinofara kuti mwana haana kusarudza kuzviita nevatengi vaive muchitoro. Kana vachengeti vaonekwa, zvese zvinotanga kutora imwe yakajeka tint, iyo inovhura kusahadzika pamusoro pekuti mwana ari vandal here, mumwe munhu anoda kukwezva kutariswa, kana zvese zvave kugadzirira kutemwa zvakanaka kuburikidza neYouTube nedzimwe midhiya. . Tinogona kufungidzira kukuvara kwayakakonzera muminiti imwe chete muApple Store inodarika € 10.000Naizvozvo, hatipokane kuti zviremera zveFrance zvichatora matanho akasimba kupokana ne "basa rakakura" iri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Jaya rinoparadza iyo iPhone yeApple Chitoro ine petanque [VIDEO]
Jajajajajajjaja mukuru achadonhedza pasuru yakanaka
Aitor murazvo akadaro
OMG nzira ipi yekuchera guva rako wega !!
Pindura kuna Aitor Llamas
Chinyorwa chinodemba. Ndakanga ndisingazive kana ndaiverenga nhau yenyaya kana maonero ako.
Shut up panchito
Kunyangwe iri fashoni brand, sikuruira yavo bhizinesi modhi. Kutumirwa kubva ku iPhone yangu: S.
inojekesa nyaya, mukomana akatsamwa nekuti iphone yake yakatyorwa uye apple haina kumupa iyo yekudzosera. Ichi ndicho chikonzero chedambudziko rako.